जूलियो अलेजेन्ड्रे। पोनिटे द्वीप को लेखक संग साक्षात्कार | वर्तमान साहित्य
जूलियो अलेजेन्ड्रे। पोनिटे द टापुहरूको लेखक संग अन्तर्वार्ता
फोटोग्राफी: जुलियो अलेजेन्ड्रेको ब्लग।
जूलियो अलेजेन्ड्रे, Extremadura मा आधारित ऐतिहासिक उपन्यास माड्रिड लेखक, को लेखक हो पोनिटेको टापुहरू, उहाँको नवीनतम उपन्यास। मलाई यो प्रदान गरिएको छ साक्षात्कार जहाँ उनले हामीलाई उनको र सबै थोरै उनको रुचिकाहरू, मनपर्ने लेखकहरू, उनको लेख्ने बानी वा वर्तमान प्रकाशन दृश्यको बारेमा बताउँदछन्। तपाईं म तपाईंको समय र दयालु व्यवहारको कदर गर्छु.
जुलियो अलेजेन्ड्रे संग साक्षात्कार
साहित्य वर्तमान: के तपाईंले पढेको पहिलो पुस्तक सम्झना छ? र पहिलो कथा तपाईंले लेख्नुभयो?
जूलियो एलेजेन्ड्रे: A कथा बच्चा जो पहिलो पठन कार्डमा आएको थियो, यो भनिन्थ्यो सिगोआन र मलाई याद छ कि यो धेरै दु: खी थियो। त्यसपछि आए हास्य र पछि युवा उपन्यास। मलाई लाग्छ कि म पाठक बन्न थालें जब मलाई महसुस भयो कि म कार्टुनहरूमा हेर्नु भन्दा बरु हास्य स्ट्रिपहरू पढ्छु।
La पहिलो कथा म एउटा बच्चाको रूपमा लेख्छु, अधिकमा आठ वा नौ वर्षको उमेर, किनभने गर्मीको छुट्टीहरूमा मेरो आमा भाइहरू बीच संगठित कथा प्रतियोगितामलाई लाग्छ कि हामी उनलाई अलि आराम गर्न सक्छौं। र त्यहाँ हामी सबै उफ्र्यौं - त्यहाँ हामी पाँचजना थिए - कथा बनाउन।
JA: मैले किशोरावस्थामा पढेका धेरै पुस्तकहरू, विशेष गरी रोमांच:कप्तान ग्रान्टका बच्चाहरू, जुल्स भेर्न द्वारा, पछिल्लो मोहिकान, फेनिमोर कूपर, इत्यादि द्वारा, तर हुनसक्छ त्यो एक हो जसले मलाई सबैभन्दा धेरै प्रहार गर्‍यो ठूलो भालुको प्रेमसर्गुइज्ज प्यासेकीद्वारा, जुन उनीहरूको कारवाही रूसी-सोभियत सीमामा तस्करको रूपमा अन्तर्राष्ट्र युगमा सम्बन्धित छ। त्यो जंगली र पागल जीवनको आकर्षण, नियमबिना, भोली बिना, मलाई तस्कर बन्न चाहेको थियो। यो रेनो संग्रहमा प्रकाशित भएको थियो र मसँग अझै प्रतिलिपि छ। यसमा पहेंलो र फूलो पृष्ठहरू छन्, तर म यसलाई काममा ल्याउन उत्साहित छु र समय-समयमा म यसमा फर्कन्छु।
JA: मेरो मनपर्ने लेखक हो जुआन राल्फो। उनले केवल एउटा पुस्तक र कथा संग्रह लेखेका थिए, तर उसलाई अझ आवश्यक पर्दैन। सामान्यतया मलाई लेखकहरूको मन पर्छ जादुई यथार्थवाद, जसले मेरो लेख्ने र बुझ्ने साहित्य, मारियोलाई धेरै प्रभावित गरेको छ वर्गास लोलो, गार्सिया मार्किज, जियोकोन्डा केही। स्पेनिशबाट, म गोन्जालोसँग बस्छु टोरेन्ट ब्यालेस्टर र रामन जे। सान्डर। पनि Vazquez Montalban मलाई एकदम मन पर्छ। सबै २० औं शताब्दीबाट। XIX बाट, Becquer, पहिले नै दुई शताब्दीहरू बीच, पोओ बारोजा.
JA: मलाई मन पर्यो थाहा छ काल्पनिक र ऐतिहासिक धेरै पात्रहरू, कि ती मध्ये कुनै एक छनौट गर्न गाह्रो छ, तर पक्कै पनि म त्यो पीडित Conradian चरित्र संग काँध मा मलाई मनपर्थ्यो छ भगवान जिमसंग कार्लोस Deza, को melancholic नायक सुख र छाया वा साहसी संग शांती Andíaबारोजा द्वारा।
को लागी सिर्जना गर्नुहोस्, म माया गर्छु हन्निबल कि उसले रूपरेखामा काम गरे गिजबर्ट हेफ्स उनको विकराल उपन्यास मा।
JA: लियो बाट रातमा ओछ्यान, र यदि एक दिन म गर्दिन, यस्तो लाग्छ केही हराइरहेको छ। मलाई लेख्न मन पर्छ रेडियो खुला संग र भोल्यूम धेरै कम। अर्को शौक: जब म लेख्दै छु उपन्यास मैले शैली मात्र पढ्छु पुलिस। यसले मलाई जडान विच्छेद गर्न मद्दत गर्दछ।
जे ए: म यसका लागि लेख्न रुचाउँछु बिहान, जुन म राम्रो ध्यान केन्द्रित गर्दछु, जुन कामले मलाई त्यसो गर्न केही अवसरहरू प्रदान गर्दछ। र ठाउँ, पछाडि बाहिरको अनुहारको झ्याल, हेर्न र परिदृश्य मनन गर्न सक्षम हुन।
AL: हामी तपाईंको उपन्यासमा के पाउँछौं पोनिटेको टापुहरू?
JA: एक को सम्भावित ओडिसी जहाज त्यो हो घाटा मा दक्षिणी प्रशान्त, मा १ XNUMX औं शताब्दीको अन्तमा, र फेरि कहिल्यै सुनेन।
यो ऐतिहासिक विधा भित्र पर्छ, तर यो वास्तवमै छ जीवनको संघर्षको अनन्त नाटक: नाविकदेखि लिएर बसोबास गर्ने, रईलाहरू र साधारण मानिसहरू, पुरुष, महिला र केही केटाकेटीहरू, जुन राम्रो जीवनको खोजीमा आवासीय समुद्र र वन्य भूमिहरूमा फ्याँकिएका हुन्छन्, सबै प्रकारका र गुणहरूको एक सय बयासी। तिनीहरू सोलोमन टापुहरू भेट्न जाँदै थिए, तर तिनीहरूले अष्ट्रेलिया पत्ता लगाए; तिनीहरूले महिमा खोजे तर तिनीहरूले पापीहरू भेट्टाए; र यशको सट्टामा, इतिहासले उनीहरूलाई बिर्सन सक्छ। मित्रता, घृणा, प्रेम, वफादारी र विश्वासघात, दु: ख र महानता को एक माइक्रोस्कोज्म, कुरा, संक्षेपमा, जसमा हामी सबै बनेका छौं।
AL: ऐतिहासिक शैलीका अलावा तपाईंलाई मनपर्ने अन्य विधाहरू?
JA: मेरो अनुहार राम्रो छ र म सबै कुरा पढ्छु। कविता, इतिहास, विज्ञान र धेरै कथनकुनै पनि युग, विधा वा साहित्यिक वर्तमान, उपन्यास वा छोटो कथा, स्प्यानिशमा लेखिएको वा अनुवाद गरिएको, स्थापित लेखक वा indies। तर, विशिष्ट हुन प्रयास गर्दै, म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु कि मलाई यो मनपर्दछ जादुई यथार्थवाद, the कालो लिंग, ला सामाजिक उपन्यास, त्यो साहसिक, ला भिकोरियाना, ला विज्ञान कथा, the रहस्य, केहि कल्पना विधा (मैले एक हप्तामा रिंगको प्रभुलाई खाएँ), किशोर, यूटोपिया ... जे भए पनि, मैले धेरै पनि निर्दिष्ट गरेको छैन।
JA: मलाई यो मन पर्छ एकै समयमा धेरै पुस्तकहरू पढ्नुहोस्। अब म एक पुस्तक संग संलग्न छु कागजातहरू ऐतिहासिक, समुद्रको तिहाइ Magdalena de Pazzis द्वारा, कथाहरूको संग्रह स्टीभनसन र उनको बारेमा एक उपन्यास ओलोफ पाल्मेको हत्या, निःशुल्क गिरावट मा, एक सपना मा जस्तैलेफ जी। पर्सन द्वारा, धेरै चाखलाग्दो, वैसे।
र म हुँ लेख्न una ऐतिहासिक उपन्यास १ XNUMX औं शताब्दीमा सेट भयो, लास इस्लास डे पोनिटे जस्ता, तर जसको विषयवस्तु लामोमा केन्द्रित छ युद्ध को लागि एट्लान्टिक डोमेन.
JA: लेखक बढ्दै छन् र गिरावटमा प्रकाशकहरू। यो गाह्रो दृश्यको पूर्ण परिभाषा हो। को असंख्य सम्पादकीयहरू जुन केही दशक पहिले स्पेनमा रहेको थियो अब तिनीहरूको हातमा छन् ठुलो समूह जो बीमामा शर्त लगाउँछन्, प्रकाशकहरू मध्यम र सानो तिनीहरू हुन् संतृप्त मूल को, र डेस्कटप प्रकाशन बन्छ धेरै व्यावहारिक विकल्प प्रकाशित गर्न।
व्यक्तिगत रूपमा, साहित्यिक प्रतिस्पर्धाले मलाई धेरै मद्दत गरेको छकथा र उपन्यासको। यदि यो उनीहरूको लागि नभएको भए मैले कहिल्यै प्रकाशित गरेको थिइनँ।
जे.ए .: म बस्छु जहाँ एक सानो शहर मा Extremadura गहिरो, मलाई लाग्छ कि स better्कटले राम्रोसँग सामना गरिरहेको छ: आफैंलाई square० वर्ग मिटरको भुईँमा सीमित राख्नु भनेको आँगन, बगैचा वा कोरलको घर जस्तो छैन। जे भए पनि, म सँधै हेर्न मनपराउँदछु चीजहरूको सकारात्मक पक्षतथापि, ती गाह्रो हुन सक्छ, र यो महामारीले मलाई अनुमति दिएको छ मेरो परिवारसँग लेख्नुहोस् र लेख्नुहोस् पहिले जस्तो कहिल्यै भएको थिएन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » जूलियो अलेजेन्ड्रे। पोनिटे द टापुहरूको लेखक संग अन्तर्वार्ता
यो अन्तर्वार्ताबाट लेखकहरूलाई भेट्न सँधै रमाईलो हुन्छ, उनीहरूको शुरुआत र उनीहरूको प्रेरणा मलाई धेरै न्यानो हुन्छ।
उत्तम सस्पेंस पुस्तकहरू
सबै विधाको फेब्रुअरीका लागि new नयाँ विज्ञप्ति